Mandalay Certified Net (MCN) Co., Ltd မှ Professional Traing & Professional IT Service, Website လုပ်ငန်းများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ Online Shopping, Business လုပ်ငန်းများအားလုံး Online ပေါ်တွင် အောင်မြင်စွာ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင် လည်ပတ်နိုင်ရန် အတွက် "Facebook Advertising & Marketing" ၀န်ဆောင်မှု အားလက်ခံဆောင်ရွက် ပေးနေပါပြီ။
Company Page များ၊ Online Shopping Page များ၊ လူကြီးမင်းတို့၏ အရောင်းဆိုင်များ၊ Product များ (သို့) လတ်တလော ရောင်းချလိုသော ကုန်ပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့၏ ကြော်ငြာများအား Customer အမြှောက်အများဆီသို့ တရှိန်ထိုး ရောက်ရှိသွားစေရန် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ကြော်ငြာနိုင်မည် ဖြစ်ပါ သည်။
လူသန်းပေါင်းများစွာ အသုံး ပြုနေသော Facebook Social Media ပေါ်တွင် လူကြီးမင်းတို့၏ Facebook Page (သို့) Post အား Boost ပြုလုပ်၍ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် Page (သို့) Product အား လူသိများလာခြင်း၊ Like အရေအတွက်များလာခြင်း၊ ၀ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းကို အချိန်တိုအတွင်း လူသိများကာ တိုးတက် အောင်မြင် လာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ Mandalay Certified Net မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရစေ၊
ကြော်ငြာ Package များ
Service Fees ကောက်ယူခြင်း
Facebook ပေါ်တွင် စွမ်းအား ကြီးကြီးဖြင့် ကြော်ငြာနိုင်ရန်-
လူကြီးမင်းတို့၏ Facebook Page အား လူသိများလာပြီး Like အရေအတွက်များလာစေရန် Page Boost ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Page ကြော်ငြာခြင်း၊
လူကြီးမင်းတို့၏ Facebook Page မှ Post တစ်ခုခြင်းစီ (သို့) နောက်ဆုံး Update Post ၊ Product ကြော်ငြာများအား Customer အများအပြား သိရှိ ၀ယ်ယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သီးသန့် Post ကို Boost ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Post ကြော်ငြာခြင်း၊
လူကြီးမင်းတို့၏ Facebook Page မှ Product များကို ရုပ်သံ စုံလင်စွာဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် ရိုက်ကူးပြီး လူအများသိရှိလာအောင် စွဲဆောင်မှုရှိရှိ Photo / Video များကို Boost ပြုလုပ်ကြော်ငြာခြင်း၊
ကြော်ငြာအတွက် ကျသင့်ငွေ ကြော်ငြာခများကို US($) ဖြင့် တွက်ယူကောက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်၊ လူကြီးမင်း တို့စိတ်တိုင်းကျ Package များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုကာ ကြော်ငြာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ကြော်ငြာ လိုသော Amount ကိုနေ့စဉ် "Currency Exchange Rate" အတိုင်း တွက်ချက် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကြော်ငြာ Package များ-
အသက်အရွယ်၊ Location နှင့် Target များကို အသေးစိပ် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်၊ လူကြီးမင်းတို့ ကြော်ငြာအတွက် အသုံးပြုထားသည့် ငွေပမာဏအလိုက် Estimated People Reached အရေအတွက် ကွဲပြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်၊
Service Fees ကောက်ယူခြင်း-
Facebook Page, Advertising Post (Photo & Video) Publish ပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါက Boost ပြုလုပ်ပေးခြင်းအတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် ၀န်ဆောင်ခ ( ၅၀၀၀ ကျပ်) သာ ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်၊
Full Service အနေနှင့် Facebook Page မရှိသေး၊ မပြုလုပ်ရသေးသည့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက်လည်း Facebook Page, Advertising Post (Photo & Video) Publish လုပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာပြီးဆုံးသည်အထိ အစအဆုံး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုကိုလည်း သီးသန့် ဈေးနှုန်းဖြင့် ဈေးနှုန်းသက်သာ စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်၊
Mandalay Certified Net (MCN) Co.,Ltd
Telephone: +95-9-774825639, +95-9-774825639.
Office: No. (A-311), 29 Road, Between 62th & 63th Street, Chan Aye Thar Zan
Township, Mandalay City.